Real Oo Dabayaaqada Xagaagan Wadahalo La Furaysa Ronaldo & CR7 Oo 2 Shardi Oo Adag Diyaar-saday %
Kooxda kubada cagta Real Madrid, ayaa waxay dhamaadka fasal ciyaareedkan ay fureysaa wada halo heshiis kordhin ah, kaasoo ay la galayso ciyaaryahankeeda Cristiano Ronaldo, sida lagu sheegay maqaal lagu daabacay Majalada MARCA, ee wadanka Spain.
CR7 ayaa qandaraaska uu hada kula joogo Los Blancos wuxuu ka dhacayaa sanadka 2020, isagoona horey usheegay in uusan dooneyn inuu dib usaxiixo heshiis kale, taasoo la macno ah inuu doonayo inuu bedasho kooxda uuna aado mid kale.
Warar ayaa sheegaya in kabtanka xulka qaranka Portugal uu ka fikirayo inuu uweeciyo waayihiisa ciyaareedka dhanka horyaalka Shiinaha, laakiin Madaxweynaha Real Madrid oo sheekadaan ka hadlay wuxuu ku tilmaamay mid uusan taasi la socon isaga.
Laakiin, MARCA ayaa waxay aaminsan tahay in Madaxweynaha Real Madrid iyo kooxdiisa ay diyaar uyihiin inay Ronaldo ku abaalmariyaan heshiis cusub, kaasoo uu kooxda kula sii joogayo kadib markii uu dhawaan lasoo baxay bandhig heer sare ah.
Ronaldo ayaa wuxuu doonayaa in hadii uu saxiixayo heshiis cusub la kordhiyo mushaarkiisa, islamarkaana la simo ama laga sara marsiiyo labadda wiil ee uu xifaaltanka kala dhaxeeyo ee Lionel Mess iyo Neymar, kuwasoo min 45 iyo 35 Milyan oo Yuuroo kala qaata.
Shuruuda labaad ee uu Cristiano Ronaldo ku xiri doono hadii uu qandaraas cusub saxiixayo ayaa waxay tahay in kooxda aanan la keenin Neymar, sida ay leedahay MARCA, maadaama madaxda iyo ciyaartoyda kooxda ay dhowr jeer ka hadleen.
Neymar ayaa wuxuu dhawaan uga soo biiray PSG dhigeeda Barcelona, markaasoo lagu soo iibsaday aduun lacageed dhan 222 Milyan oo Yuuroo, taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid taariikhda kubada cagta la gato.
Sikastaba, Ronaldo ayaa wuxuu umuuqdaa mid dib ugu soo laabtay qaab ciyaareedkiisa saxda ah, kadib markii uu dhaliyay 21 gool 13 kulan oo uu dheelay ciyaarihii udambeeyay, taasoo hami badan gelisay maamulka Real, oo ah inay ceshtaan Joogdheerahooda.